लेखनको भन्दा पनि देशको चिन्ता बढी छ !
सरिना राज भण्डारी
बिश्व परिबेशलाई हेर्ने हो भने नेपाली भाषा बोल्ने र पढ्ने पाठकहरुको सङ्ख्या निकै कमी छ । अङ्ग्रेजी भाषाको माध्यमबाट जान सके हाम्रो नेपाली कला साहित्यले फट्को मर्ने कुरा निस्चित छ । अङ्ग्रेजी भाषाको माध्यमबाट अमेरिकाको न्यूयोर्कमा लामो समय देखि लेखनमा लागी रहनु भएको एक चर्चित ब्यक्तित्व हुन राजन थपलिया ।
राजनले अहिले सम्म १० ओटा पुस्तकहरु प्रकासित गरी सक्नु भएको छ भने ११औ किताब आइ प्रमिस यु टेन डेज टु ट्रान्स्फोर्म योर लाईफ् नामक पुस्तक बजारमा ल्याउने तयारी गरी रहनु भएको छ । त्यो बाहेक उहाँ बिश्वको चर्चित सन्चार माध्यम हफिङ्टन पोस्ट, साथै इलाईट डेलीमा आबद्द हुनु हुन्छ। बिशेष गरी उहाँको सृजनाहरु युबा बर्गहरु बिच निकै लोकप्रिय छन्। यिनै कुराहरुको सेरोफेरोमा रहेर लेखक राजन थपलियासँग गरिएको कुराकानीः
एउटा लेखकको हिसाबमा भन्नु पर्दा देशको माया कति लाग्छ ?
देशलाई सबै भन्दा धेरै माया गर्ने नै लेखकहरु हुन । उनीहरुको हर लेखनमा त्यहाँ भित्र गहिरो बेदना र चिन्तन छ । व्यक्तिगत हिसाबमा भन्नु हुन्छ भने म देश साथै नेपाल र नेपालीहरुलाई धेरै माया गर्ने मान्छे हुँ । आफु नेपाली भएकोमा म निकै गर्ब गर्छु ।
आज देशको स्थिती जे भए पनि हाम्रा पुर्खाहरुको बलिदानीको इतिहास बिश्वलाई थाहा छ। त्यो बलिदानीको इतिहास कसैले मेट्न सक्दैन। सानै देखि गीत, कबिता र चित्रकलाको माध्यमबाट माया पोख्थे। यहाँबाट पनि देशप्रति चासो राख्नु साथै कसैलाई गाह्रो पर्दा सहयोग गर्न तत्पर हुनु यी सबै कुराहरु देश प्रेम हुन । देशको माया शब्दमा भन्दा पनि मनले पोख्न चाहन्छु ।
धनले भन्दा पनि आफ्नो नले देखाउन चाहन्छु। दौरा सुरुवाल र ढाका टोपी लगाउदैमा मात्र नेपाली पहिचान हुँदैन्, साचो देश प्रेम मनले देखाउने कुरा हो । देशलाई माया गर्न नेपालमा नै बस्नु पर्छ भन्ने छैन । देशलाई माया गर्ने आफु सक्षम नगरिक हुनु पर्छ ।
सक्षम नागरिकले देशलाई राम्रो भिजन दिन सक्छ । देशको लागि सबैले आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ भन्ने छैन तर बिदेशमा भएको कोही नेपाली चाहे जहाँ सुकै होस नेपालप्रति चिन्ता गर्छ र देशको हरेक गतिबिधिहरु नजिकबाट नियाली रहेको छ भने उसलाई देश प्रेमि नागरिक भन्न सकिन्छ।
आफु जन्मेको देशलाई बिश्वको सन्चार माध्यमहरुमा गरीब देश भन्दा या भोका नाङगा, पिडित जनताहरुको भिडियो देख्दा निकै दुःख लाग्छ। त्यसैले नेपालको गाउँ गाउँ बिकास नभए सम्म जति भाषाण गरे पनि गफै मात्र हुन्छ । हामी देश भक्त हौं भने गाउँ गाउँ बिकास गरौं।
देशको पिल्लर बलियो बनाउ अनि पो घर बलियो हुन्छ। देश प्रति माया हुनेले नै हो चिन्ता ब्यक्त गर्ने, किनभने चिन्ता ब्यक्त गर्न पनि देश प्रति माया र माया गर्न सक्ने मुटु हुनु पर्छ। व्यक्तिगत रुपमा भन्नु हुन्छ भने मलाई लेखनको भन्दा पनि देशको बढी चिन्ता छ।
अचेल केमा ब्यस्त हुनु हुन्छ ?
म लेखनमा ब्यस्त छु । दिनको ३-४ घण्टा त नयाँ नयाँ भाषा शैलीहरुको प्रयोग तथा नयाँ सोचको प्रयोग लेखनमा कसरी गर्ने भन्नेमा नै केन्द्री त छ । त्यसै क्रममा अघि बढी रहेको ब्यक्ती हुँ। अब आउन लागेको आइ प्रोमिस यु भन्ने किताबको तयारीमा छु । सोच बदलेर अघि बढे जिबन सजिलै अघि बढछ भन्ने कुराको प्रमाण हुनेछ । बिल्कुल नयाँ शैलीको किताब हुनेछ । त्यो बाहेक आफ्नो दैनिक कृयाकलापहरु त छदैछ।
“आइ प्रोमिस यु” कस्तो प्रकारको किताब हो र पाठकहरुले किन पढ्ने ?
“आइ प्रोमिस यु” जिबनलाई सही बाटोमा लाने र सफल हुन चाहने साथै असफल भएकाहरुलाई एक मार्ग दर्शन दिने अर्को शब्दमा भन्दा परिवर्तनमा बिश्वास गर्नेहरुको लागि अचुक औषधी नै साबित हुनेछ भन्ने बिश्वास लिएको छु । किन पढ्ने किन नपढ्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन।
तपाईं परिवर्तनमा बिश्वास गर्ने एक असल नगरिक हो भने पनि अझै राम्रो कसरी गर्ने भन्ने ब्यबस्थापनको कुराहरु छ। असफल भएका र निरास भएकाहरुलाई पनि बिभिन्न सुत्रहरु दिइएको छ। मनोबल बढाउने उपायहरु दिइएको छ । दुनियाँमा मनोबल भन्दा ठुलो कुरो केहि छैन।
किन भने संसार भनेको जित्न चाहनेहरु कै लागी हो। यो किताबमा जिबनमा हारेर थकेकाहरुलाई पनि परिवर्तन गराउने र गर्न सक्ने अचुक मनोबल बढाउने कुरा साथै केहि गर्नु पर्ने अभ्यासहरु छन् । त्यसकारण पढ्नु पर्ने नपर्ने भन्ने कुरा पाठकले छुट्याउने कुरा हो ।
किताब आफ्नो लागि लेख्नु हुन्छ कि पाठकहरुको लागि ?
किताब भन्ने कुरा सबैको लागि लेखिन्छ। कोही ब्यक्ति बिषेश उसैलाई भन्ने छैन।
बिभिन्न मिडियाहरुसँग पनि आबद्द हुनु हुन्छ । हाम्रो नेपाली मिडिया र बिदेसी मिडियाको कार्य शैलीमा के कुरा फरक देख्नु भयो ?
नेपालमा धेरै मिडियाहरु खुलेका छन् । अझै धेरै खुल्नु पर्छ । त्यो राम्रो कुरा हो । जति धेरै मिडियाहरु भयो त्यति नै छिटो ज नाताहरुले सुचना पाउछन् । बिदेसी मिडियामा सानो कुरामा पनि रिसर्च धेरै गर्ने बानी छ। हाम्रो नेपाली मिडियाहरु म त्यो चहि अलि कमी छ । त्यो कुरालाई सुधारदै जाने हो भने धेरै राम्रो छ ।
ब्यक्तिबादी सोच तथा कसैको गुण गान गाउनु भन्दा पनि देशलाई इमान्दार भएर लेखनमा लाग्दा धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । बिदेशी संचारमा लगानी धेरै छ, त्यसको पहुच धेरै ठुलो हुन्छ। हाम्रो नेपाली मिडियाका मान्छेहरु आफुले सकेको गरी रहनु भा छ । सके जति गर्ने नै हो म उहाँहरुले आफ्नो ठाउँबाट जति गर्नु भा’छ त्यो कामको सम्मान गर्छु।
आफुलाई कुन बिधाको लेखन मन पर्छ ?
बिशेष गरि ब्यक्तित्व बिकास र दर्शन अनि गहन बिचार भएका लेखहरु बिशेष मन पर्छ। भबिश्यमा पनि उपन्यास र सेल्फ हेल्प राइटिङमा नै ब्यस्त हुनेछु। यही कुराहरु मन बढी मन पर्छ ।
लामो समयदेखि लेखनमा हुनु हुन्छ तपाईंलाई मन पर्ने लेखक को को हुनु हुन्छ र किन मन पर्छ ?
मलाई कोही ब्यक्ति होस या पुस्तक मन पर्न मेरो मनको भाबनासँग मिल्नु पर्छ, मज्जाले जोडिन सक्नु पर्छ त्यस्ता कुराहरु सधै भरी सुन्दा पढ्दा आनन्द लाग्छ।
भाबनाका कुराहरु मात्र भन्दा पनि सोच बिचार परिवर्तन गराउन सक्ने हैसियत बोकेका किताबहरु मन पर्छ । त्यस्ता कृतिहरु सधै बाची रहोस जस्तो मन देखि नै लाग्छ। मलाई मन पर्ने लेखकहरुमा जोल ओस्टिन्, स्टेफन किङ्, मार्क ट्वैन, एरियाना हफिग्टन् र यलिस मुन्द्रो हुन । त्यो बाहेक ओसो साहित्यको एक फ्यान हुँ। व्यक्तिगत रुपमाम आनन्द र जिबन परिवर्तनको लागि अध्ययन गर्ने गर्छु।
के यो लेखन पेशा समयको बर्बादी हो ?
नकरात्मक रुपमा हेर्ने हो भने मान्छेको जिबन पनि केहि होइन नि दुर्इ दिनको घाम छाया हो। सकरात्मक पाटो ई हेर्ने हो भने त स्वर्गिय आनन्द यही छ । हरेक ज्ञानको सुरुवात नै लेखन चिन्तन मननबाट भएको छ । यसलाई पनि समयको बर्बादी भन्ने हो भने अरुकेलाई समयको आबादी भन्ने । बिल्कुल समयको बर्बादी होइन।
यहाँ ठुलो अबसर छ, आफुलाई चिनाउने अबसर्, आफुमा भएको ज्ञानलाई बाड्ने अबसर, राम्रो किताब लेखेर बिश्व प्रख्यात हुने अबसर, मिलिनियर हुने अबसर । कता तिर र कुनै पनि कुराको कुन पाटोलाई मान्छेले हेरेको छ त्यसमा भर पर्छ।
सबै सन्त महात्माहरु खुशी छन् भन्ने हुँदैन र सबै धनी मान्छेहरु सुखी छन् भन्ने पनि छैन र फेरी दुःखी नै छन् भन्ने पनि छैन। किनभने हरेक कुराहरु आफ्नो आफ्नो हेराइ बुझाइको निस्कर्ष हो। उनीहरुले जिबनको कुन पाटोलाई नियाली रहेका छन् ।
खुशी भन्ने कुरा त्यसमा भर पर्छ। हामीले हाम्रो जिबनमा बिगतमा गरेका राम्रा कामहरुको पाटोहरुलाई एक चिन हेरौन, खुशी भन्ने कुरा त्यही लुकेर बसेको छ मात्र हाम्ले खोजी रहेका छैनौ। खोजौ त्यो चिजलाई ममन गर्दै अघिी बढौं । खुशी त्यही छ ।
एक मोटिभेसनल लेखकको रुपमा जिबनमा निरास भएकाहरुलाई र अरुको आलोचना मात्र गरेर बस्नेहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
जिबनमा हामी निरास हुनु भनेको एक भ्रममा बाच्नु हो। दिउसै अन्धकार देख्नु हो, बाहिर घाम लागि रहेको छ दिउसै अध्यारो देख्नु हुन्छ भन्ने आफैमा भएको कमजोरीलाई हटाउने पो हो कि ? राम्रो चिजमा फोकस गर्ने पो हो कि ? जती सुकै जे गरे पनि अन्तमा आखिर आफुलाई जिउदै किन मार्नु हुन्छ।
आखिर मरेर लाने त केहि होइन नि त्यसैले आफुलाई आफैले निराशाको भुमरीमा धकेल्नु भने को आफुलाई बेबकुफ बनाउनु हो। जिबनमा सधै बिकल्प खोज्ने बानी बसाल्नुस जिबनमा कहिले निरास भन्ने कुरा हुनै पर्दैन । हामीले बिकल्प सोच्नै सक्दैनौ, एकहोरो भएर यौटै कुरामा अध्यारोको पछी दौडी रहन्छौ !
हो त्यसकै परिणाम आज भोग्दै छौ। निरास हुनु हुन्छ भने आजैबाट ठुलो सपना देख्नुस हरेक कुराहरुको बिकल्प खोज्नुस त्यसपछि यति ब्यस्त बन्नु हुने छ कि निरास हुने समय नै पाउनु हुन्न। अरुले के भन्यो भनेन भन्ने सँग मतलब हुँदैन आफुले राम्रो कम गरेर देखाउनुले अर्थ राख्छ ।
आलोचना गरेर बस्नेहरुलाई भन्नु केहि छैन। दुर्गन्धमा पौडी खेलेर कोही बसेका छन् भने देख्नेहरु पनि नाक थुनेर हिड्छन त्यहाँ केहि भन्ने कुरा हुँदैन। अरुको आलोचना गरेर कोही ठुलो हुने पनि होइन । मान्छेको जुनि लिए पछि पसु जस्तो हुन खोजेको राम्रो होइन।
आफ्नै समयको बर्बादी हो। माटोमा जति सुकै पुर्न खोजे पनि सुन सुनै हुन्छ फलाम फलाम नै हुन्छ। आलोचनाको साटो कसैको राम्रो कामको तारिफ गर्दा अरुलाई पनि अझै केहि गरौ भन्ने भाबना आउछ। जिबनमा राम्रो गर्न चाहनेहरुले अरुको कुरा सुनेर समय बर्बाद गर्दैनन्, आगो झै अघि बढ्नु पर्छ ।
दुनियामा तपाईंलाई आफुलाई जति बुझ्नु भएको छ त्यो अरुले भनेको २ शब्दले तपाईंको जज्मेन्ट गर्न सक्दैन। राम्रा मान्छेहरुले राम्रो कुरा बाड्छन् भने घटियाहरुले आफ्नो रुप देखाइ हाल्छन्। नकरात्मक सोच भएका तुच्छ मान्छेहरुलाई दुनियाले त के एक दिन आफ्नै परिवारले पनि थुक्छ। बिग्रेका र बाटो बिराएकाहरुलाई सुध्रने आधिकार छ। भागवानले सत बुद्धी दिउन ।
तपाईंका भबिष्यको योजना साथै अन्त्यमा के भन्नु हुन्छ ?
आफु स्वस्थ हुने, समय अनुसार परिवर्तन हुने, अर्गानिक (नेचुरल) जिबन पद्दतीसँग जिबन अगाडी बढाउने। अहिले गरी रहेका कृयाकलापहरुलाई बिश्व ब्यापीकरण गर्ने, लेखन कै मध्यामबाट देश चिनाउने । अन्तमा के भन्छु भने हामीले जिबनमा यो भएन त्यो भएन भनेर गुनासो गर्नु साटो अहिले सम्म गरेको राम्रो राम्रो कुराहरुलाई सोचेर त्यो पल सम्झेर अझ राम्रो गर्ने प्रण गर्दै अघि बढ्नु पर्छ।
कुनै काम गर्नु अघि जितेको पलहरु सम्झिने हो भने नयाँ शक्ति दिन्छ। जित सुनिस्चित नै हुन्छ। यो जिबनको सानो र सरल सुत्र हो जुन आजैबाट सुरु गर्नुस रामबाण साबित हुनेछ। जिबन तपाईं कै हो जिउनुस खुलेर।
संसार तपाइ कै हो बाच्नुस हासेर। जन्म जातै जितेर आएका छौं त्यसैले सानो कुरामा जिबनसँग सम्झौता नगर्नुस। ठुलो सपना देख्नुस ठुलो मान्छे बन्नुस। एक दिन धर्तीबाट बिदा हुँदा पनि आत्मा देखि नै तपाईं खुशी हुने बताबाराण बनोस । जुन लोकमा भए पनि हाम्रो जिबन धन्य धन्य होस। खुशी भन्ने कुरा आफुले गर्दा मात्र होइन अरुले प्रगती गरेको देख्दा पनि लाग्छ। सबैले प्रगती गरेको र सबै मान्छेहरुले राम्रो गरेको हेर्न चाहन्छु।